manager | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ကဏ္ဍ manager, Password, PC-Software
ဒီ Tool လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ WebBrowser တွေမှာ Password တွေကို Save ထားပြီး နောက်ပိုင်း မေ့သွား တတ်တာ ရှိပါတယ်။ Browsers တွေမှာရှိတဲ့ ဘယ်လို Password မျိုးကို မဆို ဖေါ်ပြပေး ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ပြီးရင် Window Password ဖေါ်ကြည့်တဲ့ Software လေးတွေကိုပါ ထပ်တင်ပေး သွားပါဦးမယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/KRqrlmoSI_w/webbrowserpassview-v165-final.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကျွန်တော် အရှေ့မှာ တင်ပေးခဲ့ တာတွေက Browsers တွေနဲ့ Password ဖေါ်ကြည့်တဲ့ Tools လေးတွေပါ။ အခုကတော့ Window Password မေ့ တတ် သူများ အတွက် Boot CD တွေနဲ့ Password ပြန်ပြီး Repair လုပ်စရာ မလိုပဲ ဒီကောင်လေးနဲ့တင် ဖေါ်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေ နိုင်မှာပါ။
တစ်ခုရှိတာကတော့ ဒီကောင်လေးအတွက် .Net Framework 4.0 စက်ထဲမှာရှိမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 26 MB ရှိပါတယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/AJ6rLVAi3FM/password-vault-manager-final.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
အခု မိတ်ဆက်ပေး လိုက်တဲ့ Application လေး ကိုတော့ Android User တိုင်း ဆောင်ထား စေချင် ပါတယ်။ တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့ Apk လေး တစ်ခုပါ။ Autorun Manager လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ မလိုအပ် ပဲနဲ့ Auto Run နေတဲ့ Application တွေကြောင့် ဖုန်းကို လေးလံ နှေးကွေး စေပါတယ်။
အင်တာနက် အသုံးပြု ရမှာလည်း Data နဲ့ အသုံးပြု သူတွေ အတွက် Auto Run Application တွေကြောင့် ငွေပိုကုန်စေ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြသာနာ တွေကို Autorun Manager ဆိုတဲ့ Apk လေးက ဖြရှင်းပေး နိုင်ပါတယ်။
Run နေတဲ့ Application တွေကို Disable ပြုလုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ Disable သာ လုပ်ထားမယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ Application တွေက ဘယ်တော့မှ Run မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဖုန်းကို Restart ချ ပြီး ပြန်တက် လာလည်း Run မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Disable လုပ်ထားတဲ့ Application တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီး Run မှသာ သူက အလုပ် လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို အသုံးတည့် နေပါပြီ။ Android OS 2.2 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Do you want to know why your app always automatically starts up?
Autorun Manager is an super tool that helps you to analyze the autorun behavior and lets you can disable or remove autorun components of an app.
The tool provides2methods to disable autorun for both rooted device and non-rooted device. Please read the help doc to get more information.
Yes, it provides remove function for non-rooted devices, that isabig difference with other autorun tools. Feel free to use it! (But please note this feature is only available for user apps)
kw: autorun, autostart, startup, manage, profile, optimize, speedup, root
make app list more friendly;
enable search aurorun apps by events.
Updated : February 22, 2014
Size : 648k
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 28, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, manager, Phone Application
App Manager application တွေမှာ နံမည် ကြီးတဲ့ application တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ AppMgr Pro III (App2SD) version update လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေး ချင်ပါတယ်။
Feature အသစ်တွေ များစွာ ပါဝင်လာပြီး လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်တဲ့ အချက် အလက် တွေက စုံလင် လာပါတယ်။ Google Play မှာတော့ 2.99 ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချ ထားပါတယ်။
ချစ်ပရိတ်သတ် တွေထဲက အသုံး လိုသူ များ ကတော့ ကျွန်တော် ဆိုဒ်မှာ FREE Download အနေနဲ့ ရယူ လိုက်ပါ။
အသုံးပြုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်နော် ...
Android OS တွေ အတွက် အသုံးဝင် Tools ပေါင်း မျိုးစုံ ပါဝင်တဲ့ 3C Toolbox Pro v1.2.7 apk
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင် ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်တဲ့ 3C Toolbox Pro ဗားရှင်းသစ်ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေး ကတော့ System တွေထဲမှာ အလွန် အသုံးဝင်တဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Android Device တွင်လည်း ဒီ Toolbox ဟာ အဲဒီ OS Tuner ကြီးလို ထပ်တူ ရေးဆွဲ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ အရေးကြီး ဘက်ထရီပိုင်း၊ Backup ပိုင်း တို့မှာ ဖုန်းတစ်လုံး အတွက် တကယ် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆော့ဝဲ လေးပါ။
မိမိ ဖုန်းဟာ Root Access ရရှိထားပြီးသား ဖုန်းတစ်လုံး ဆိုရင်တော့ Not Root Device ဖုန်းတွေ ထက် အသုံးပြု ရတာ ပိုအဆင်ပြေ ပါတယ်။ အသုံး လိုတယ် ဆိုရင်တော့ ဆောင်ထားလိုက်ပါ။10.5 MB ရှိပါတယ်။ 2.3 အထက် ဖုန်း အားလုံးမှာ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, March 10, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, manager, Phone Application, Tools
ဖုန်း အတွက် တကယ် လိုအပ်တဲ့ Apk တွေထဲမှာ ပါတဲ့ 3C Toolbox Pro v1.2.6
ကျနော် ဒီနေ့မှာ အသစ် ထပ်တက် လာတဲ့ Toolbox pro လေးကို အားလုံး အတွက် တင်ပေး လိုက်
ဒီကောင်လေး ကိုတော့ အားလုံးလည်း သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။ တကယ် လိုအပ်မယ့် ဆော့ဝဲတွေ
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင် ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် ဖုန်းကလိသူနဲ့ ဖုန်း Service သမား ဘော်ဒါတွေက
OS System တွေထဲမှာ မရှိ မဖြစ်တဲ့ ဆော့ဝဲ တစ်ခု ရှိကောင်း ရှိနေ ပါလိမ့်မယ် အဲဒါ ကတော့ Tuner
ဆော့ဝဲပေါ့၊ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုလုံးကို ပေါ့ပါး သွက်လက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ နေရာမှာတော့
All in One ကြီးပါ။
Android Device တွင်လည်း ဒီ Toolbox ဟာ အဲဒီ OS Tuner ကြီးလို ထပ်တူ ရေးဆွဲ ထားတာ ဖြစ်
ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ အရေးကြီး ဘက်ထရီပိုင်း၊ Backup ပိုင်း တို့မှာ ဖုန်းတစ်လုံး အတွက် တကယ်ပြီး
အခုနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ ဒီကောင်ရဲ့ Feature လေးတွေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ Device
manager, File explorer, Application manager, Network manager, Task manager, System
Control, System Monitoring, Status bar notifications, Highly Configurable Widgets,
System Toggles, Terminal Emulator & Script Editor, System Logs Reader စတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး
အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ Feature တွေ ပါဝင်နေ တာကို သတိထား မိရင် ဒီဆော့ဝဲဟာ integration
and optimisation အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး သင့် အတွက် တတယ် မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားရမယ့် စပါယ်
ရှယ် ဆော့ဝဲကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ ဖုန်းတစ်လုံး အတွက် အကောင်းဆုံး ဒေါက်တာပေါ့။
အကြံပေးချင် တာကတော့ မိမိဖုန်းဟာ Root Access ရရှိထားပြီးသား ဖုန်းတစ်လုံး ဆိုရင်တော့
Not Root Device ဖုန်းတွေထက် အသုံးပြု ရတာပို အဆင်ပြေ ပါတယ်။ အသုံး လိုတယ် ဆိုရင်
တော့ ဆောင်ထား လိုက်ပါ။
10.5 MB ရှိပါတယ်။ 2.3 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
By : ဇူးနစ်(နည်းပညာ)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 10, 2015 No comments:
Android Device တွေကို ပေါ့ပါးစေတဲ့ BusyBox Pro v25 apk
ဒီနေ့ ထွက်လာတဲ့ application ဖြစ်တဲ့ ဒီ apk ကိုတော့ Android ဖုန်း Tablet ကိုင်ဆောင် သူများ
အတွက် အထူး အရေးကြီးပြီး ဆောင်ထားသင့်တဲ့ apk တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကတော့ ဘော်ဒါတို့ အနေ့နဲ့ Android Device / ဖုန်းကို Root လုပ်ပြီးရင် မြန်မာ Font
တွေ သွင်းမယ် ဆိုရင် Busy box ကို တောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ Busy box ရဲ့ အာနိသင်တွေ ထဲမှာ
Android Device တွေကို ပေါ့ပါးစေတဲ့ အာနိသင်လည်း ပါပါတယ်။
ယခု Busy Box Pro v23 က Android Device System တွေကို မြန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ အာနိသင်
က ပြောစရာမလို သ လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီကောင်လေး၏ အသုံးဝင်းပုံ (ပုံစံ) အသုံးပြုပုံ တွေကို
တော့ အောက်မှာ Screen Shot တွေ ပြထားပါတယ်ဗျာ။
ဖိုင်ဆိုဒ်လေး ကတော့3MB ဖြစ်ပြီး Andiod OS အားလုံးမှာ သုံးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
ဖုန်းရဲ့ Memory RAM ကို စိတ်တိုင်းကျ Manages လုပ်ပေးနိုင်မယ့် RAM Manager Pro v7.1.2 APK
မိမိတို့ Android ဖုန်းရဲ့ Memory RAM ကို စိတ်တိုင်းကျ Manages လုပ်ပေးနိုင်မယ့် RAM
Manager PRO v7.1.2 APK ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Full Version Apk လေးကို တင်ပေး
Ram ပိုင်း ဆိုင်ရာကို စီမံ ခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်တဲ့ application ကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Custom Rom တင်ထားတဲ့ ဖုန်းမျိုး ဆိုရင် Ram ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့် ယူလို့ ရစေ တာ
ဟာ ဒီ app ရဲ့ အထူး ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
Full Version Pro လေးဖြစ် တာကြောင့် Features တော်တော် များများကို စုံလင်စွာနဲ့ အသုံးပြု
ခွင့် ရစေမှာပါ။ apk file size ကလည်း 656.5KB သာသာလေးပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီ ​apk ကိုအသုံးပြုဖို့ အတွက် မိမိဖုန်းဟာ Root ဖြစ်​ထားဖို့​တော့ လိုပါမယ်​- Android OS Version
2.1နှင့် အထက်ရှိ ထားသော ဖုန်းများမှာ ထည်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အောက်​က link ​မှာ​ ဒေါင်းလုပ်​ ရယူနိုင်​ပါပြီ။
ကဏ္ဍ Android, manager, Memory, Phone Application